Maxamed Xasan Cirro: “Askartii Ururuka al-Itixaad iyo hoggaanka maanta ee Puntland maxaa la gudboon?” (waraysi | dhegayso) – Radio Daljir
Maxamed Xasan Cirro: “Askartii Ururuka al-Itixaad iyo hoggaanka maanta ee Puntland maxaa la gudboon?” (waraysi | dhegayso)
Febraayo 14, 2019 2:47 b 0
Maxamed Xasan Cirro oo ah qoraaga “Hoggaanka cusub ee Puntland iyo askartii aI-Itixaad ee sannadkii 1993,” qoraalkaas oo yeeshay saameyn ballaaran, dhaliyeyna hadal-haynta ugu badan Puntland ayaa waxa aan ka waraysanay dulucda qoraalkiisa.
Md. Cirro ayaa il gaar ah ku eegaya musuqa baahsan ee ka jira Puntland iyo hoggaanka siyaasadda Soomaaliya oo uu leeyahay waxa ay maanta u badanyihiin siyaasiyiin lagu tirayo in ay badanaa yihiin diinyaqaan.
Haddaba maxaa la gudboon hoggaanka maanta si loo suuliyo musuqa dalka halaagay?
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20292
Ilhaan Cumar oo u jawaabtay Trump “Haddiiba qof ay tahay inuu is casilo waa Trump”
MARTISOOR: RW Kuxigeen Mahdi Maxamed Guuleed iyo khudbadiisii London (dhegayso)